निर्मला पन्तको पोस्टरः जति च्यातो, उति भाइरल! हेर्नुस यस्तो छ भाइरल हुनुकाे कारण! – PathivaraOnline
Home > समाचार > निर्मला पन्तको पोस्टरः जति च्यातो, उति भाइरल! हेर्नुस यस्तो छ भाइरल हुनुकाे कारण!
निर्मला पन्तको पोस्टरः जति च्यातो, उति भाइरल! हेर्नुस यस्तो छ भाइरल हुनुकाे कारण!
admin December 4, 2018 December 4, 2018 समाचार	0
काठमाडौँ / बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको स्केचसहितको पोस्टर छ्यापछ्याप्ती देखिए –१३ गते बिहान राजधानीका मुख्य चोकहरुमा । पोस्टरमा उनको स्केच मात्रै थिएन, ‘सरकार भेटियो न्याय भेटिएन’ र ‘ह्यासट्याग इम्प्युनिटी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड’ पनि लेखिएको थियो । जसरी सरकारले ११ गते राजधानीबासीलाई अचम्मित पार्ने गरी ‘नयाँ युगको सुरुवात’ लेखिएको नारासहित प्रधानमन्त्री मुस्कुराइरहेको पोस्टर टाँगेका थियो ।
निर्मलाका लागि न्याय मागिएको पोस्टर सहरभरि फैलाउन उस्तै तरिका अपनाइएको थियो । प्रहरीले न्याय माग्ने ती पोस्टरलाई च्यातेन मात्र, टाँस्ने केहीलाई पक्राउसमेत ग¥यो । न्याय खोज्नेहरु झनै उत्साहित भए । पोल र भित्तामा पोस्टर त टाँगिएको थिए नै, सोमबारसम्म आइपुग्दा देशव्यापी रुपमा सवारी साधनमा स्टिकर टाँसिन थालेका छन् । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।
हाम्रोसवाल डटकमबाट साभार गरिएकाे सामाग्री ।
खुशीकाे खबरः अरू सुन्दरीहरूलार्इ उछिन्दै फेरि नेपालकै लागि श्रृङ्खलाले फेरि थपिन अर्को अवार्ड,
जन्ती लिएर अाउनै लागेकाे झापाकाे विवाह एकाएक यसरी रोकिएपछि…
यस्तो रहेछ छोरी तानातान काण्ड ! दुवै परिवारको चेपुवामा नाबालक छोरीको कारुणिक दृष्य (भिडियो सहित)
भर्खरै बाहिरियो निर्मला हत्या प्रकरणबारे अहिलेसम्मकै ठूलो रहस्य !! हत्यारा लुकाउन प्रहरीले नै ठूलो षडयन्त्र गरेको आइजिपीले गरे यति ठूलो खुलासा
मध्यरातमा वडाध्यक्षको यो कस्तो धन्दा ? परे प्रहरीको फन्दामा
बाल अभियन्ता प्रेन्साले, गृहमन्त्रीलाई दिइन, अप`राधबाट देश जोगाउने सुझाव